Booliiska Chicago oo lagu eedeeyay saangadasho ah - BBC News Somali
Booliiska Chicago oo lagu eedeeyay saangadasho ah
Lahaanshaha sawirka Martin G. Johnson / YouTube
Image caption Dadka deegaanka ayaa Booliiska kula murmay gaari ay alaab ka buuxiyeen si ay ugu dabaan tuugo
Booliiska magaalada caanka ah ee dalka Maraykanka ee Chicago ayaa sheegay in ay dib uga fiirsan doonaan farsamo cusub oo ay dabin ugu qooleen tuugo, kadib markii lagu eedeeyay in ay qaab takoor ah u bartilmaameedsanayaan dadka madoowga ah.
Dhibka waxa uu ka jiraa halka ay booliiska dabinka dhigeen ay ahayd xaafad ay ku badanyihiin dadka madoow ee faqriga ah, taas oo keentay in la'is weeydiiyo daacadnimada iyo niyad samaanta booliiska, iyo gaar ahaan taliyaha ciidanka oo laftiisa ah nin madoow.
Muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa waxaa ka muuqda booliiska oo kabo iyo alaabo qaali ah kasoo buuxiyay gaari weyn, albaabkana xoogaa ka furey, kadibna meel ugu dhuuntay tuugada.
Dad dhawr ah ayaa la sheegay in la xiray kadib markii ay isku dayeen in ay xadaan waxa meesha ku jiray.
Booliiska oo sharaxaya farsamadooda dabinka cusub ayaa sheegay in ujeedka uu ahaa in looga hortago falal tuugonimo oo kusoo batay rimoorka baabuurta waaweyn ee xamuulka ee halkaas la dhigo ama isticmaala.
Image caption Taliyo Eddie Johnson iyo waaxdiisa booliiska ayaa lagu eedeeyay falal aan haboonayn
Ururka u dooda xuquuqda xoriyadda dadka ee ACLU ayaa booliiska magaaladan ugu baaqay in ay dhisaan kalsoonida shacabka halkii ay samayn lahaayeen farsamooyin 'ma dhalays ah' sida hadalka loo dhigay.
Dabinka ay booliiska u dhigaan tuugada waa wax iska caadi ah dalka Maraykanka, waxaana dhacda in ay alaabo qaali ah meelo dhigaan, kadibna ku xiraan aalado lagu dabo galo karo haddii la xado.